Ingabe uyazazi izimpawu ezinhlanu zesifo sikashukela? -
Oyedwa kwababili unesifo sikashukela esingakatholakali eNingizimu Afrika. Ingakho kubalulekile ukuthi siveze izimpawu ezinhlanu zesifo sikashukela ukuze bonke abantu bazi ngazo ngisho nalaba obaziyo. Kahle lokho ikhona lokhu okuqukethwe inhlangano ebizwa ngokuthi Know Diabetes movement: Singasishintsha isibalo sabantu abangakatholakali ukuthi banalesifo ngokuthi sidlulisele lezimpawu kwimndeni yethu kanye nezihlobo zethu, siphinde sibanxuse ukuthi bawuhlabe bawulawule batshele nabanye abantu abasekudeni nathi. Zibandakanye nathi ekhasi Diabetic South Africans ukuthola ulwazi olwanele lokuthi uphile kanjani uma unesifo sikashukela
Izinkomba Ezinhlanu ezikhombisa ukuthi unesifo sikashukela
Ukulambela ukudla kakhulu
Ukomela kakhulu amanzi
Ukuya njalo endlini yangasese uyozikhulula [Ukuyochama]
Ukungaboni kahle emehlweni
Ukuhlolela izinga likashukela emzimbeni kuyashesha futhi ke kulula – kanti ke nemiphumela uyithola ngokukhulu ukushesha lokhu ngoba phela kuthatha imizuzu emihlanu. Sicela nigqugquzele wonke umuntu ukuthi ahlole ushukela akanawo emzimbeni unyaka nonyaka!
Ingabe khona imbuzo onayo mayelana nesifo sikashukela? Vakashela ikhasi lethu Diabetes Info section bese usebenzisa isikhala sokubheka imbuzo khona uzokwazi ukuthola izimpendulo ezifanele. Ingabe kusekhona eminye imbuzo onayo? Sithumele umlayezo nge meyili yethu, thina ke sizobe sisebenzisa ongcweti bethu diabetes experts khona bezokwazi ukuphendula imbuzo yakho ngendlela eyenelisayo.